1 lAdeegga Baal Dahab wuxuu xifdin doonaa macluumaadkaaga aad adiga galisay, sida magacaaga, email-kaaga iwm. Hase yeeshee xogahaaga oo dhan annaga ayaa meel xafidan oo aammin ah ku haynayna, lamana wadaagayno cid ama adeegsade kale oo aadan adiga la wadaagin.
2 lBaal Dahab wuxuu kugula talinayaa inaadan furesireedkaaga (password) cidna la wadaagin. Isku day inaad samaysatid furesireed dheer oo kuu gaar ah isuguna jira xarfo, tirooyin iyo calaamado.
3 lBaal Dahab wuu saarayaa golaha qoraal kasta oo xadgudub ku noqon kara Xaqa nuqulka (Copyright) ama Hanti Garaadeedka (Intellectual Property).
4 lBaal Dahab wuxuu adeegsadayaasha u oggolaanaya inay sameystaan gole u gaar ah (oo ay ku kaydsan karaan aqoonsiga, farriimaha, sawirrada, fiidyowyada, aagagga dahabiga ah, bogagga ay sameysteen iwm iyagoo kaligood arki kara ama saaxiibbada/dadweynaha la wadaagi kara). Adeegsadayaashu waxay kaloo fursadahooda Gaar-ahaanshaha dib uga eegi karaan qaybta habeynta (Settings).
5 lHaddii aad Baal Dahab dhexdiisa ka isticmaalaysid ama ka soo degsanaysid barnaamij ama (software), waxaan mar kasta ku weydiin doonaa inaad oggoshahay in xogahaaga shakhsi (sida magacaaga, xogkoobkaaga iwm) in lala wadaago cida barnaamijka aad degsaneyso iska leh iyo in kale. Sidoo kale, waxaan oggolaanshahaaga u baahan doonnaa haddii barnaamij muuqaaleed laguu cusboonaysiinayo oo/ama muuqaallo cusub lagu kordhinayo.
6 lBaal Dahab wuxuu xusuusanayaa aaladaha ama goobaha aad xisaabtaada ka samaysatay oo aad sida caadiga ah ka gashid. Haddii aan ogaanno gelitaan aan caadi ahayn, isla markiiba waan kula socodsiin doonaa. Markaad noo sheegtid inaad adiga tahay, waxaan u arki doonaa in gelitaankaasu uu yahay gelitaan ammaankiisu sugan yahay, haddiise aadan noo sheegin, waxaa suurogal ah inaan goobtaas ka xannibno in xisaabtaada laga galo.
7 lHa illoobin inaad xisaabtaada ka baxdid oo xirtid mar kasta oo aad ka gashid meelaha ay ka midka yihiin goobaha internetka, kombiyuutarrada xafiisyada, telefoonada gacanta ee dadka kale iwm.
8 lMar kasta oo aad ogaato waxyaabo baraha bulshada soo galay oo u muuqda inay yihiin sharci darro, af-xumo, ama dhib u geysanaya qof ama bulsho gaar ah amaba xadgudub ku ah xuquuqda dadweynaha, fadlan degdeg noogu soo sheeg si aan tallaabooyinka loo baahan yahay arrintaas uga qaadno.
Macluumaadka aan Uruurinno
Baal Dahab inta uu shaqaynayo oo Adeegyadiisa bixinayo wuxuu uruuriyaa macluumaadka ay ka midka yihiin rakibista, soo gelista iyo isticmaalka Adeegyadiisa.
Macluumaadka Xisaabta: Marka aad xisaab Baal Dhahab ah sameysanaysid waxaad bixinaysaa macluumaad ay ka mid yihiin magacaaga, magaca qoyska, lambarka telefonkaaga gacanta, iimaylka iwm. Waxaan ku marsiin doonaa waddo aan kugu xaqiiqsanayno annagoo ku weydiin doona lambarka telefonkaaga iyo iimaylkaaga. Marka lagu hubsado oo macluumaadkaaga la xaqiijiyo, waxaad noqonaysaa adeegsade Baal Dahab oo sharciyeysan. Adiga ayaa xogkoobkaaga u sameysanaya magac iyo furesireed kuu gaar ah oo aan kuu haynayno si aan xubinnimadaada ugu aqoonsanno.
Ku darsiga Saaxiibbada: Waxaan diiwaan gelinaa dadka aad xogkoobkaaga ku soo dartid iyo kuwa aqbala codsigaaga saaxiibtinimo. Waxaad dooran kartaa in diiwaanka saaxiibbadaa lagula wadaago ama kaligaa ayay kuu gaar ahaan karaan.
Farriin Dirista: Si toos ah ayaad saaxiibbadaa farrriimaha isu weydaarsan kartaan. Si aan sheekadiina qof saddexaad ama cid kale aysan ugu gacan gelin, farriimaha aad adiga iyo qofka saaxiibkaa ah is weydaarsataan qofna xaq uma lahan inuu arko.
Aagaggayga Dahabiga ah: Macluumaadka aad sida gaarka ah u xiiseynaysid waxaad ku haysan kartaa aagaggaaga dahabiga ah, haddii aad rabtidna, aagaggaas dadweynaha ayaad la wadaagi kartaa.
Qoraalladaada: Waxaad soo gudbin kartaa wixii cusub, sawirrada, fiidyowyada, summadaha iwm adigoo kala dooran kara inay gaar kuu noqdaan iyo in kale. Sidoo kale, waxaad dooran kartaa cidda aan adiga ahayn ee ardaagaaga wax ku qori karta.
Ardaagaaga: Ardaagaaga waxaa ka muuqanaya qoraallada aad adigu soo dirtid, kuwa saaxiibbadaa (ee aad oggolaatay inay ardaagaaga qoraallo ku soo diraan) iyo waxyaabaha lagugu lammaaniyay ama si gaar ah laguugu adkeeyay. Qoraalka lagugu lammaaniyay waad iska reebi krtaa.
Ka helidda iyo faallooyinka: Diiwaan ayaan kaaga sameynaynaa qoraallada aad ka heshay ama aadan ka helin iyo weliba faallooyinka aad ka bixisay waxyaabaha la soo diray. Sidoo kale, Baal Dahab wuxuu diiwaan ka sameeyaa ka helidda, ka helid la’aanta iyo faalloyinka qoraalladaada laga sameeyo.
Bogagga aad sameysatay: Waxaa laguu oggol yahay inaad dooratid in boggaagu uu gaar kuu noqdo. Baal Dahab wuxuu mar kasta kula socodsiinayaa tirada Riyaaq ee uu boggaagu helay, faallooyinka qoraallada boggaaga laga bixiyay iwm. Baal Dahab wuxuu kuu sheegayaa mar kasta oo boggaagu helo ka helid cusub ama qoraal boggaaga ku jira laga helo, laga heli waayo, cid kale lala wadaago ama faallo laga bixiyo.
Lacag xawilista: Mar kasta oo aad kharashka Adeegyadayada bixiso, Baal Dahab wuxuu helayaa macluumaad lagu xaqiijinayo bixinta kharashka iyo waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin faahfaahinta kaarkaaga Bankiga. Baal Dahab marnaba ma kaydinayo macluumaadka kaarkaaga bangiga.
Macluumaadka Aaladda: Baal Dahab wuxuu uruuriyaa macluumaadka aaladda aad golaha ka gashid iyo goobta ay aaladdaasi taal. Sidoo kale, Baal Dahab wuxuu kaloo uruurin karaa aaladda aad waxyaabaha cusub uga rakibaneyso ama aad kharashyada Adeegga ka bixineyso iwm.
Macluumaadka uu Baal Dahab Dadka kale la Wadaago
Magacaaga cinwaanka iyo Sawirkaaga xogkoobka:Marka aad xulatid cidda arki kartaa xogkoobkaaga, Baal Dahab ayaa dadkaas u gudbiya xogkoobkaaga oo ka kooban magacaaga cinwaanka, sawirka xogkoobka iyo qoraallada aad dadweynaha la wadaagtay. Marka aad saaxiib cusub ku soo darsato, qofkaasi wuu arki karaa wixii qoraallo ah oo aad ugu talogashay in asxaabtaadu kula wadaagaan.
Barnaamijyada dadka kale:Mar kasta oo aad isku daydid inaad rakibatid ama aad gashid barnaamij dad kale leeyihiin, xayaysiis la fududeeyay iwm kuwaasoo u baahan macluumaadkaaga, Baal Dahab mar kasta oggolaanshahaaga ayuu ku weydiin doonaa ka hor inta uusan macluumaadkaaga dadkaas la wadaagin.
Kooxdayada taageerada macaamiishu waxay diyaar kuula yihiin inay kaa caawiyaan dhibaato kasta oo kaa hor timaada inta aad adeegsaneysid barnaamijka Baal Dahab, dhibaatooyinkaas oo ay ka mid yihiin cilladaha iyo habsami u shaqaynta adeegga. Dhaqdhaqaaqyada adeegga ka dhex socda oo dhan si toos ah u ula soconaya hawlwadeenada Baal Dahab oo hubinaya in adeegyada aan bixinno si shrciga waafaqsan loo isticmaalo. Baal Dahab wuxuu dabagal ku sameyn doonaa wixii xadgudub ah oo lagu sameeyo shuruudaha noo degsan ama marka falal shaki dhalin kara shabakadda dhexdeeda ay ka dhacaan, iyada oo markiiba laga qaadi doono tallaabooyin xadgudubyadaas ku haboon.